giving back – Hissho Sushi
ဖေဖော်ဝါရီ 17, 2016 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
02.17.16 | Hissho သည်ချစ်သူများနေ့အတွက်နှလုံးသားများကိုဖော်ပြခြင်း & #039; s နေ့ဖြစ်သည်
Hissho သည်မကြာသေးမီကမြန်မာနိုင်ငံမှဒုက္ခသည်များကို Hissho ဆန်နှင့်အဓိကတန်ဖိုးများဘတ်ဂျက်မှဝယ်ယူထားသောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်များအမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ၎င်းတို့သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရန်မကြာခဏထွက်ခွာသွားကြသည်။ သငျသညျဘာသာစကားကိုမသိခဲ့ပါ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါနှင့်သင်၌ရှိခဲ့သမျှအားလုံးတူညီတဲ့လှေထဲတွင်အနည်းငယ်အခြားသူများရှိခဲ့သည်လုံးဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့ "ပစ်ချ" ခံခဲ့ရသည်ဆိုပါစို့
အထီးကျန်နေသောပင်လယ်ထဲတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအကြီးတန်းဒုက္ခသည် ၂၃ ဦး သည်စုပေါင်းအဖွဲ့ကိုပြသရန်အတွက်အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဤအစည်းအဝေးသည်မြန်မာနိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူအခြားတစ် ဦး ၏အိမ်တွင်ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ရှိလူငယ်များသည်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ အရသာရှိသောအိမ်လုပ်ကြက်သားနှင့်ဆန်ဟင်းချိုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများလက်သည်းညှပ်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပင်ပြသခြင်းအားဖြင့်ကူညီခဲ့ကြသည်။ လက်သည်းညှပ်ညှပ်စက်ကိုသင်တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးပါက၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိပါသလော။
ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏခွင့်ပြုထားသည့်အရေးကြီးသည့်အရာများဖြင့်အိမ်သာသုံးစက္ကူ၊ လက်သုတ်ပုဝါနှင့်အဝတ်လျှော်များ၊ ဆပ်ပြာအရက်ဆိုင်များ၊ ဟစ်ရှိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစုဆောင်းထားသောဟိုတယ်သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ပြည့်စုံသောဇစ်ခေါက်အိတ်များ၊ နှင့်လက်သည်းညှပ်များ ထိုင်။ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေသောလူတစ် ဦး စီကသူတို့အမည်ကိုခေါ်ရန်စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ပေါင် ၅၀ တန်အိတ်များသည်“ စုဆောင်း” လာကြသူများထက်ပိုကြီးသည်။ အားကောင်းသောလူငယ်များက၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ guests ည့်သည်များကိုသယ်ယူရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ကားများသို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဖြန့်ဝေမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်၌ငါတို့အားလုံးသည်ထူ။ မွှေးကြိုင်သောကျန်းမာသန်စွမ်းသောကြက်သားနှင့်ဆန်ဟင်းချိုကိုစားရန်အတူထိုင်ကြသည်။ ငါရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တာကဒါကအကောင်းဆုံးကြက်သားနဲ့ဆန်ဟင်းချိုပဲ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာကြက်ခြောက်ကောင်သည်မြန်မာဟီရှိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ် ဦး အားမြန်မာလယ်သမားတစ် ဦး ထံမှဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထိုကိစ္စအတွက်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လုံးဝသဘာဝကျကျ: ဟော်မုန်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Hissho ၀ န်ထမ်းများသည်ဤသေးငယ်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်နာရီအနည်းငယ်သာရှိသောထိုသူများအတွက်များစွာအကျိုးရှိခဲ့သည်။
အကြိမ်များစွာကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်တရာလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားတစ်ဝိုက်ကိုသာကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်လျှင်ကူညီပေးပါ။
ဒီဇင်ဘာ 2, 2015 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
12.02.15 | Hissho မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း!
Hissho သည်အသိုင်းအဝိုင်းအားပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ခိုင်မာသောအစဉ်အလာရှိပြီးကျေးဇူးတော်နေ့သည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ မြို့အပြင်ဘက်နှင့်မိသားစုမဟုတ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ Hissho အဖွဲ့မှအချို့သည်မီးဖိုချောင်ရှိ Charlotte ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်တွင်နံနက်ခင်း၌စေတနာ့ဝန်ထမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာသွားနှင့်မီးဖိုချောင်အသင်းတစ်ခုလုံးနှင့်အတူချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမျှဝေကိုချစ်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာသွားသည့်အခါမိသားစုကဲ့သို့ဖြစ်၏! ငါတို့အတွက်အစားအစာပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေကတော့ကမ်းလှမ်းထားတာကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သည်တစ်နေ့လုံး ၁၂၀၀ ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အပြုံးများတစ်နေ့လုံးပြန့်ပွားခဲ့သည်။
မတ် 27, 2015 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
03.27.15 | လိုအပ်သူတွေကိုနည်းနည်းကံကောင်းခြင်းကယူဆောင်လာခြင်းအပိုင်း ၂ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Hisshonians မှပေးသောလှူဒါန်းမှုများမှတစ်ဆင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များ၊ ချစ်ပ်များ၊ သစ်သီးများ၊ ကွတ်ကီးများနှင့်ရေများကို ၀ ယ်ယူပြီး“ အညိုရောင်အိတ်” နေ့လည်စာများကိုစုစည်းပြီး၊ Charlotte, NC ရှိ Crisis Assistance Minister တွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ http://www.crisisassistance.org/)
လက်ခံသူများပြသသည့်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုသည်သိသာထင်ရှား။ အားရဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရပ်ရွာကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရာတွင်သင်၏ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Hisshonians များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မတ် 13, 2015 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
03.13.15 | လိုအပ်သူတွေကိုနည်းနည်းကံကောင်းပါစေ။
သင်မြင်တွေ့ရသောထိုအတုအယောင်များသည်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့၏နှိမ့်ချသော Hisshonians မှအလှူငွေများဖြစ်သည်! လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Hisshonian လူမျိုးများကိုသူတို့လိုအပ်နေသောသူများအတွက်နေ့လည်စာဝယ်ရန်မည်မျှပင်လှူဒါန်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ ချစ်ပ်များ၊ သစ်သီးများနှင့်ရေများကို ၀ ယ်ယူမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်အညိုရောင်အိတ်များကိုနေ့ချင်းညချင်းစုစည်းပြီး Charlotte, NC ရှိ Crisis Assistance Minister တွင်ဖြန့်ဝေပေးလိမ့်မည်။ ဒီကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘယ်လိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။ http://www.crisisassistance.org/)
ဒီစီမံကိန်းအပေါ်ပိုမိုများအတွက်ညှိနေဖို့ !! ပြီးတော့ငါတို့သိချင်တာကမင်းကတစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်လိုနည်းနည်းလောက်ကံကောင်းထောက်မပေးတာလဲ။ !